Beta-kii ugu horreeyay ee macOS 11.3 horeyba ugu jiray gacanta horumariyeyaasha | Waxaan ka socdaa mac
Beta-kii ugu horreeyay ee macOS 11.3 horeyba ugu jiray gacanta horumariyeyaasha
Waxaan cadeyneynaa in Apple aysan joojin doonin bilawga noocyada beta ee nidaamyadeeda kaladuwan ee kala duwan kiiskanna macOS 1 Big Sur beta 11.3 Horeba waxay ugu jirtaa gacanta kuwa soo-saareyaasha ah si ay u ogaan karaan mid walba oo ka mid ah hal-abuurka la soo helay.
At Apple waxay si weyn u daryeelaan barnaamijka sida aan wada ognahay iyo noocaan cusub Shirkaddu waxay ku sharraxeysaa dhowr horumar oo nidaamka ah sida: taageerada isteero ee HomePods, ikhtiyaarka ah inaad ku hubiso caymiska firfircoon ee Mac, shaqaaleeyo Apple Care ama hagaajinta ku-habeynta Safari sida ku cad 9 ilaa 5mac.
Waxoogaa isbeddello ah qaabkan macOS Big Sur 11.3
Ka dib markii la soo saaray nooca rasmiga ah ee 'macOS Big Sur', ma aanan arkin isbeddelo badan oo ku saabsan waxqabadka nidaamka hawlgalka sida nooca beta cusub. Runtu waa taas shirkadda Apple waxay ahaayeen kuwo "la isku geeyay" hagaajinta amniga, xasilloonida iyo isku halaynta ee Big Sur, sidaas darteed hadda waxay umuuqataa inay bilaabi karaan inay kudhowaan waxoogaa isbeddello ah xagga howlaha iyo xulashooyinka.
Awood u lahaanshaha xulashada HomePod ee ah wax soo saarka asalka ah ee Mackeena oo leh taageero buuxda oo loogu talagalay AirPlay 2, ikhtiyaarka ah in lagu hubiyo daboolka qalabka fartayada, hagaajinta kordhinta iyada oo la adeegsanayo xitaa tabsyada Safari ama xulashada dib u habeynta xusuusin, waa qaar ka mid ah horumarada badan ee lagu soo kordhiyay qaybtan cusub. Intaa waxaa dheer, sidee bay u ahaan kartaa si kale, shirkaddu waxay ku dareysaa qaybtan beta beta hagaajinta cilladaha caadiga ah iyo hagaajinta xasilloonida nidaamka. Noocaan cusub wuxuu si fiican u rinjiyeeynayaa marka loo eego wararka Big Sur.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Big Sur » Beta-kii ugu horreeyay ee macOS 11.3 horeyba ugu jiray gacanta horumariyeyaasha
Aynu aragno haddii ay u hagaajinayaan barnaamijka muusikada kuwa doonaya inay muusikooda u dhigaan, oo u shaqeeya sida dameerka, oo dhigaya daboolida iyo ereyada markay ku habboon tahay.
Iyo waxa ku saabsan homepods-ka macnaheedu waa inaan horeyba u isticmaali karno lammaane isteeriyo ah iyo in ka baxsan barnaamijka muusigga horeyba looga maqli karo rikoodh ??? tan iyo markii ay soo baxday homepod-kii asalka ahaa.
Ming-Chi Kuo ayaa sheeganeysa in gaariga Apple uu imaan karo sanadka 2025 aadna uu qaali u noqon doono
Hadda waxaad kiraysan kartaa Mac mini M1 saacadda daruurta dhexdeeda